ठेट नेपाली शब्दहरु जानी राखे राम्रो ~ Khabardari.com
ठेट नेपाली शब्दहरु जानी राखे राम्रो
2:25 PM admin No comments
1.विवाहमा दुलाहले दुलहीलाई लाइदिने औठीलाई के भनिन्छ?
2.मुर्दा बेर्ने कपडालाई के भनिन्छ?
3.टुनामुना जान्नेलाई के भनिन्छ?
4.अर्नाको बच्चालाई के भनिन्छ?
5.अरुसँग नमिल्ने स्वाभावको मान्छेलाई के भनिन्छ?
6.टोपीको माथिल्लो भागको घेरालाई के भनिन्छ?
8.बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने कपडालाई के भनिन्छ?
9.चौरी गाईको पुच्छरलाई के भनिन्छ?
10.मदानीको टुप्पोलाई के भनिन्छ?
11.मदानीमा बेरिएको धागोलाई के भनिन्छ?
12.गहना बनाउँदा खेर जाने सुनलाई के भनिन्छ?
13.गहनाहरु ठोकिएर बज्दा निस्कने आवाजलाई के भनिन्छ?
14.टाउको नभएको मान्छेलाई के भनिन्छ?
15.सौतेनी आमा पट्टिका दाजुभाईलाई के भनिन्छ?
16.तुलसीको पातको मुनालाई के भनिन्छ?
17.डाडु र पनियो एकै ठाँउ भएको सामाग्रीलाई के भनिन्छ?
18.घोडाको गर्धको रौ लाई के भनिन्छ?
19.रक्सी बनाउने मानिसलाई के भनिन्छ?
20.दिदिले भन्दा पहिले विवाह गर्ने बहिनीलाई के भनिन्छ?
21.खोलो फैलिएर तर्न सकिने ठाँउलाई के भनिन्छ?
22.रजस्वला हुने अवस्थाकी किशोरीलाई के भनिन्छ?
23.आँखी भौ भएको ठाँउलाई के भनिन्छ?
24.भरियाले भारी बिसाउने क्रममा प्रयोग गर्ने लट्ठीलाई के भनिन्छ?
25.आकाश र पृथ्वी जोडिए जस्तो देखिने ठाँउलाई के भनिन्छ?
26.लास लैजादा बाटोमा फाल्ने पैसालाई के भनिन्छ?
27.सेतो गुँरासलाई के भनिन्छ?
28.सारङ्गी रेट्ने साधनलाई के भनिन्छ?
29.बाँदर नचाउनेलाई के भनिन्छ?
30.विवाह नगरेकी युवतीबाट जन्मेको छोरालाई के भनिन्छ?